लालप्रसाद शर्मा - कान्तिपुर समाचार
लालप्रसाद शर्माका लेखहरु :
पत्थरमा रैथाने कन्दमुलको परीक्षण [तस्बिरहरु]
ठाउँको नामै पत्थर । यही पत्थरमा अहिले कन्दमुलका प्रजातिमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको छ । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ पाउदुरमा विभिन्न रैथाने जातका कन्दमुलको अनुसन्धान थालिएको हो । २५ रोपनी चट्टानी भिरालो जग्गा भाडामा लिएर गिठा, भ्याकुर, तरुल, ओल, सखरखण्ड, भार्लाङ, चुइया, त्यागुना, गुर्जो र पिडांलुजस्ता कन्दमुल रोपिएको हो ।
कास्कीको मादी गाउँपालिका–२ सेतीखोलामा १२ मेगावाट क्षमताको नामार्जुङ–मादी जलविद्युत् आयोजनाको काम सकिएको चार महिना भयो । तर आयोजनाले उत्पादन सुरु गर्न पाएको छैन । चिनियाँ प्राविधिक नेपाल आउन नपाउँदा विद्युत् उत्पादन गर्न नपाइएको हो ।
पोखरामा पहिरोले सात जनाको मृत्यु [अपडेट]
कास्कीका विभिन्न स्थानमा अविरल वर्षासँगै खसेको पहिरोमा पुरिएर ७ जनाको ज्यान गएको छ । पहिरोले सिद्धार्थ राजमार्गसमेत अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।
दुई दशकदेखि धान रोप्दै आएकी रविना पोखरेलका लागि यसअघिका बर्खा सामान्य भए । असार १५ आउँथ्यो, जान्थ्यो । खासै मतलब हुँदैनथ्यो । तर, सोमबार दिन उनी केही खुसी देखिइन् ।
गण्डकीमा १८ संक्रमित थपिए
गण्डकी प्रदेशमा मंगलबार १८ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । सबैभन्दा बढी गोरखामा १०, स्याङ्जामा ४, पूर्वी नवलपरासीमा २, कास्की र बागलुङमा १/१ जना संक्रमित थपिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।
गण्डकीले ल्यायो ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट [पूर्णपाठ]
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब ७० करोड ७३ लाख ६८ हजार बढी हो ।
स्याङ्जामा थपिए तीन कोरोना संक्रमित
भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका स्याङ्जाको वालिङका तीन जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनीहरू गत सोमबार गाउँ फर्किएर क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए ।
पोजिटिभ देखिएकी बाग्लुङकी महिलाको तेस्रो परीक्षणमा आयो नेगेटिभ
कोरोना संक्रमित बागलुङकी ६५ वर्षीया महिलाको बिहीबार गरिएको परीक्षणको नतीजा नेगेटिभ आएको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । अर्की संक्रमित १९ वर्षीया युवतीको भने चौथो स्वाब परीक्षणको नतीजा पनि पोजिटिभ आएको छ ।
फेवातालमा डुंगा पल्टँदा काठमाडौं कपनका २७ वर्षीय सुमित भनिने रामशरण लुईंटेल बेपत्ता भएका छन् । उनीसँगै रहेका साथीहरु रुपेश अधिकारी र सुविन चालिसेको भने सकुशल उद्धार भएको छ ।
२२२ रोपनीको विवाद टुंग्याउन आदेश
पृथ्वीनारायण क्याम्पससँगैको २२२ रोपनीभन्दा बढी विवादित जग्गाको टुंगो लगाउन उच्च अदालत पोखराले मालपोत कार्यालय कास्कीलाई आदेश गरेको छ । पोखरा–१ बगरस्थित तल्लो तगराको कित्ता नम्बर ८३३ को उक्त जग्गा पृथ्वीनारायण क्याम्पसको कि व्यक्तिको भन्ने विवाद लामो समयदेखि जारी छ ।
कतिन्जेल बनिरहने सुतुरमुर्ग ?
जीवन क्षत्री कार्तिक ११, २०७८
एउटा चर्चित उखान छ— सुतुरमुर्गले झैं बालुवामा टाउको लुकाउनु । अर्थात्, कुनै विपत्ति आइलाग्दा त्योसित जुध्नुको सट्टा देखेको नदेख्यै गरेर टार्न खोज्नु । यथार्थमा कुनै पनि चराले...
आफैं निसाफ खोज्दै सर्वोच्च अदालत
चन्द्रकिशोर कार्तिक ११, २०७८
किन उठ्न सकेको छैन सर्वोच्च अदालतको शिर ? यतिखेर दीपावलीको तयारीमा घरआँगनको सरसफाइमा जुटेका आममान्छेले यस्तै जिज्ञासा राख्ने गरेका छन् । यसको कारण अदालतप्रतिको अटुट भरोसा र...
केदार कार्की कार्तिक ११, २०७८
हरितगृह ग्यासले गर्दा औसत तापमानमा बढोत्तरी भइरहेको छ । यो जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण हो । अनि यसको प्रत्यक्ष असर मानव स्वास्थ्यमा पर्नेछ । विश्व स्वास्थ्य संगठनअनुसार तापमान...
शक्ति पृथकीकरण–सन्तुलन र प्रधानन्यायाधीश विवाद
इन्द्र अधिकारी कार्तिक ११, २०७८
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा अहिले विवादको शिखरमा छन् । पेसी–तोकाइमा मन परी गर्ने गरेको; न्यायालयमा भ्रष्टाचार र बिचौलिया मौलाएको;राजनीतिमा समेत साझेदारी/सौदाबाजी गरेर न्यायपालिकाको मर्यादा, गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था...
कांग्रेसलाई संविधान मिच्‍ने हक छैन
सम्पादकीय कार्तिक ११, २०७८
समयमै पार्टी महाधिवेशन नगरेर नेपालका प्रमुख दलहरूमध्येको एक नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक व्यवस्थाकै धज्जी उडाउनु सरासर आपत्तिजक छ । चौथो पटक सारिएको मिति— मंसिर ९ देखि १३...